Kedu ihe bụ POE? Gwọ, Nwe, Nweta ... Na Ekekọrịtara ... na Mgbasa ozi | Martech Zone
POE bụ acronym maka ụzọ atọ nke nkesa ọdịnaya. Idgwọ akwụ ụgwọ, nke a na-akwụ ụgwọ bụcha atụmatụ dị mma maka iwulite ikike gị na ịgbasa iru gị na mgbasa ozi mmekọrịta.
Idgwọ, Nwe, Mgbasa Ozi
Mediagwọ Media - bu ojiji nke uzo mgbasa ozi a na-akwụ ụgwọ iji kpoo okporo ụzọ na ozi nke ika a na ọdịnaya gị. A na-eji ya iji mee ka ị mata, gbasaa ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ yana iji mee ka ndị ọhụụ kirie ọdịnaya gị. Actzọ eji eme ihe gụnyere mbipụta, redio, email, ịkwụ ụgwọ kwa pịa, mgbasa ozi facebook, na tweets kwalitere. A pụkwara ịkwụ ụgwọ mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ mgbe a ruru nkwekọrịta maka ịkwụ ụgwọ.
Nwepu Media - bụ mgbasa ozi, ọdịnaya na nyiwe nke azụmaahịa na-achịkwa ma ọ bụ na-achịkwa kpamkpam. Ọrụ a bụ itinye ọdịnaya, iwulite ikike na mmekọrịta, yana n'ikpeazụ itinye aka na atụmanya ma ọ bụ onye ahịa. Actzọ eji eme ihe gụnyere ibipụta blọgụ, mbipụta akụkọ, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ ọmụmụ, akwụkwọ ntanetị na mmelite mmekọrịta mmekọrịta.
Mgbasa Ozi - bu inweta nkwuputa na ederede na uzo ndi edobere enwetabeghi site na mgbasa ozi - otutu oge nke a bu mkpuchi ozi. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ikike na-enwekarị ikike, ogo na mkpa maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ isiokwu enyere, yabụ ịnweta okwu na-enyere aka iwulite ikike gị ma gbasaa iru gị. Actzọ eji eme ihe gụnyere mmekọrịta ọha na eze, nchọta ihe ọkụkụ, yana mmemme ọbịbịa a na-akwụghị ụgwọ na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị na-ede blọgụ yana ịkparịta ụka n'networkntanet.
Gịnị Banyere Ekekọrịta Media?
Mgbe ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-ekewapụkwa Nnwekọrịta Media iji kwuo okwu ozugbo maka usoro ịkwọ ụgbọala site na ịkekọrịta mgbasa ozi mmekọrịta. Enwere ike ị nweta nke a site na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi mmetụta, ma ọ bụ naanị ịmepụta atụmatụ nkekọrịta mmekọrịta. Ikekọrịta usoro mgbasa ozi nwere ike ịbụ nchịkọta nke mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nke nwere, na akwụ ụgwọ abanye n'ime otu.
Chere… Na Gbanwee Media?
Nke a bụ atụmatụ na-eto eto maka ndị na-ere ahịa ọdịnaya. Mgbasa ozi agbakọrọ agbakwụnyekwara ngwakọta nke mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nke nwere, ma nweta ya. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ ederede m maka Forbes. M nwetara ebe edere ihe na Council nke Forbes Agency… Ma ọ bụ a ugwo (kwa afọ) mmemme. Ọ bụ nwere site na Forbes ndị nwere ederede na ndị ọrụ nkwalite enyere ha aka iji hụ na ọdịnaya ọ bụla bipụtara na-ezute ụkpụrụ nduzi ha siri ike ma kesaa ya.
POE Adighi Oke na Social Media
Nke a bụ ezigbo infographic na POE site na Bureaulọ Ọrụ Mgbasa Ozi mmekọrịta nke Canada na Intù Brainstorm. Ọ na - ekwu okwu POE site na ntanetị mgbasa ozi nke m kwenyere na ọ ga - egbochi. Ọdịnaya ọdịnaya, mgbasa ozi, ọchụchọ ọchụchọ, ahịa mkpanaka channels ọwa niile nke ahịa jikọtara ya na usoro mgbasa ozi ọ bụla a kwụrụ ụgwọ, nke nwere, ma ọ bụ nke a na-enweta.
Atụmatụ ndị a nwere ike ịgbasa karịa mpaghara dijitalụ gaa ahịa ọdịnala. Dịka ọmụmaatụ, azụmaahịa na-eweghachite ihe ebipụta, dịka ọmụmaatụ, n'ime nke dijitalụ. Ndị ọchụnta ego na-azụta oghere mgbasa n’elu bọọdụ ịma ọkwa iji mee ka okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ nwere. Ọzọ… POE bụ isi maka usoro ịzụ ahịa ọ bụla akwụ ụgwọ.
Ihe omuma nke POE na-agabiga gi:
Kọwapụta ụdị POE
Ihe atụ nke atụmatụ POE
Etu ị ga-esi hazie atụmatụ POE gị
Usoro na atụmatụ POE
Dijitalụ POE azịza gafee ngwaọrụ
Ihe ntinye aka banyere POE
Mediadị ụgwọ akwụ ụgwọ, nke a na-enweta na Media
N'ihe ịga nke ọma POE
Tags: mgbasa oziconverged mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa oziakwụ mmadụ mgbasa oziFacebookIAB CanadaBureaulọ Ọrụ Mgbasa Ozi mmekọrịta nke Canadaahia ahianwere mgbasa ozinwere mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa ozindịmgbasa ozi mgbasa oziIntù BrainStorm